« Raharaha andramena » : hamitaka mpividy iraisam-pirenena ny fanjakana? | NewsMada
« Raharaha andramena » : hamitaka mpividy iraisam-pirenena ny fanjakana?
Par Taratra sur 21/04/2016
Nahitana hazo tsy andramena tamin’ireo nogiazana tatsy Maorisy ary naverina eto Madagasikara ny 31 marsa teo. Mikasa ny hivarotra azy ireo ny fanjakana nefa mbola voararan’ny rafitra iraisam-pirenena Cites.
Mampiahiahy ny manodidina ireo andramena nokasaina naondrana tany Azia, saingy sarona tao amin’ny Nosy Maorisy ny taona 2011 ary tonga eto amin’ny seranan-tsambon’ i Toamasina ny 31 marsa teo. Nanatrika ny fitsenana azy ireo ny ministra roa lahy, ny misahana ny Fitantanam-bola sy ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny Ala teo aloha.
Nanomboka tamin’ny 3 ora tolakandro ny fanisana ireo andramena ary nifarana tamin’ny 11 ora alina. Fantatra fa tamin’ireo lanja 120 t, nisy hazo bolabola tsy andramena niisa 184.
Terena hatao tolobidy iraisam-pirenena
Misy ny loharanom-baovao milaza fa saika entina hamitahana ny mpividy azy any Azia ny antony nampidirana ireo hazo hafa ireo tao anatin’ny tena andramena. Ny marain’ny 1 avrily, nosarahana ny kaontenera nisy ny tena andramena sy ny hazo hafa.
Nambaran’ ireo minisitra roa, ny 31 marsa, raha nanontanian’ny mpanao gazety fa hanaovana tolobidy iraisam-pirenena ireo hazo ireo, ka izay no nanavahana azy tsara mba tsy hanaratsy endrika amin’ny tsena iraisam-pirenena sy ny fifandraisana ara-diplaomatika amin’ny firenena mety hividy azy.
Telo andro teo ho eo kosa kanefa izay, re ankehitriny amin’ny alalan’ny loharanom-baovao teny anivon’ny seranan-tsambon’ i Toamasina, nanagiazana ireto harem-pirenena ireto, fa toa nafangaro amin’ny tena hazo andramena ihany ireo hazo hafa. Hoentina hamitahana ny mpividy iraisam-pirenena ve izany…?
Manampy izany, tsy mbola nahazo alalana hivarotra ny andramena i Madagasikara satria noraran’ny rafitra iraisam-pirenena misahana ny varotra biby sy zavamaniry ahina ho lany tamingana Cites. Sa havoaka amin’ny fomba an-tsokosoko ary hanaovana taratasy ara-dalàna toy ilay raharaha mampiteraka resabe any Singapour indray?